Maalin: Janaayo 25, 2018
Waxa uu u sheegay Wasiirka Arslan Turkey Platform ku Payment Common
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri: erek Marka lagu daro awoodaha PTT ee Istanbul Metropolitan Municipal BELBIM, Türk Telekom iyo Turkcell qeybta macluumaadka iyo isgaarsiinta, Denizbank iyo Vakıf Ka qeybqaadashada bangiyada, [More ...]
Dhibaatada Dhibaatooyinka ee Ankara iyo Mashruuca Kacdoonka ee Ankara
Saldhigyada gaadiidka ee Ankara Metro iyo Ankaray, oo lacag la’aan ah sababta oo ah fashilka Ankarakart ayaa la bixiyay. Muwaadiniinta aan buuxin karin kaararka waa ay kaceen. Saldhigyada kala-guurka ee Ankara Metro iyo Ankaray, sababtuna waa fashilka Ankarakart [More ...]
Digniin kaliya oo ku saabsan Cabbiraad ku jirta Tram
Mashruuca Konak Tram wuxuu bilaabi doonaa tamar gelin xitaa berri. Si kastaba ha noqotee, nidaamka ayaa qaadi doona kumanaan volts oo lugta korantada ah oo gawaarida xad dhaafka ah waxay tirtiri doonaan argagax. [More ...]
Ololaha Saxeexa Pink Metrobus
Mashruuca Met Pink Metrobus, oo laga hirgaliyay magaalooyin badan oo kuyaala Anatolia, ayaan laga fulinin magaalada Istanbul, oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee fulintiisa. Mashruuca Met Pink Metrobus, oo laga hirgaliyay magaalooyin badan oo Anatolia ah, ayaa wali ku yaal magaalada Istanbul, bartilmaameedka ugu weyn ee fulintiisa. [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ee Dalka Shiinaha ayaa Helay Flame
Gawaarida 2 ayaa si lama filaan ah dab u qabsaday markii tareenka xawaaraha sare ee u dhexeeya Qingdao iyo Hangzhou uu joogsaday Saldhigga Dingyuan. Dhamaan rakaabkii tareenka shaqaalaha waxay arkeen qiiqa oo ka kacaya gaariga [More ...]
Magaca aan la dafiri karin ee Mashaariicda Maxalliga ah iyo kuwa Qaranka Bozankaya
Vehbi Konarılı, Agaasimaha Gobolka ee Warshadaha Sayniska, wuxuu leeyahay in kabadan shaqaalaha 800 shaqaale ee xarumaha Ankara wuxuuna ku guuleystey mashaariicda gudaha iyo kuwa qaran. Bozankayabooqday. ASO 1. 110 in acres acreska dhulkoobka 70 [More ...]
Gaadiidka wasaaradda iyo in ay soo saaraan xalalka qaran iyo kuwa maxalliga ah ee geedi socodka of digitalisation lacag, Wasaaradda Arrimaha iyo Communications Maritime taladoodu hoos shirkadaha bangiyada, isgaarsiinta, ciidamada biiray Turkey ee u adeega gaadiidka iyo maaliyadda. Istanbul [More ...]
Tareenka xun ee Talyaaniga
Tareen ku yaal agagaarka Milan oo u dhow magaalada Milan ee dalka Talyaaniga Laba qof ayaa ku dhimatay shilka, 10'u ayaa si xun u dhaawacmay sida 100 yidhi. Shilka ayaa ka dhacay Seggiano di Pioltello. Tareen ka tagaya Cremona, [More ...]
Afyonkarahisar 37004 tirada gawaarida guuraya saacadihii hore ee subaxnimadii hore ee shalay, Uşak 22 tan oo walxaha kiimikada ah ayaa lagu xardhay heerka gudbinta gawaarida. Sababo la xiriira saamaynta baararka saamaynta kiimikada ee tareenka TIR [More ...]
Injiil ka socda Madaxweynaha ilaa Saldhiga Tareenka Sare ee Suuqa
Duqa magaalada Sandaıklı Mustafa Çöl wuxuu soo gaarsiiyey war wanaagsan in xarunta tareenka xawaaraha sare laga dhisi doono Sandıklı oo leh cinwaanka 3 laga soo bilaabo koontada warbaahinta bulshada ilaa saacadaha fiidkii. Madaxweynaha Xarunta tareenka Xawaaraha Sare [More ...]
Tusaale ahaan Habdhaqan ka socda MOTAŞ
Mid ka mid ah simistarka Turkey haya Idaha Guddoomiyaha Association Malatya Branch Disabled Ali Haydar iyo Yucel Doğanşah Malatya degmada Gaadiidka iyo Gaadiidka Adeegyada Dadweynaha booqday motas aş.'y. Turkey muddo dheer [More ...]
Tilmaamaha Jidadka ee BURULAŞ
Magaalada Bursa, bayaan ayaa ka timid BURULAŞ warka ku saabsan kirada kirada. Hadalada soo socda waxaa lagu sameeyay bayaan uu soo saaray BURULAŞ: ğinde In ka kooban wararkii ku taariikhaysan ee loo yaqaan '22.January.2018; X In kasta oo toddobaadyada 6 ay dhaafeen [More ...]
Teleferik iyo Xayeysiiska Bağbaşı
Ropeway iyo Bagbasi Plateau, oo ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli si loo kobciyo nolosha bulshada ee dadka Denizli iyo in ay wakhti ku qaadato deegaannada isku xidhan ee dabeecadda, ayaa mar kale caddaan noqday. raaxaysiga barafka [More ...]
Trabzon Erzincan Railway si ay u noqoto hijrada bisha February
Mashruuca Tareenka ee Trabzon-Erzincan waxaa la qaban doonaa Febraayo. Booqashada Raiisel Wasaaraha Binali Yildirim ee Erzincan waxaa la shaaciyey inta lagu gudajiray qandaraaska Mashruuca ugu dambeeya, kaas oo horey loo shaaciyey laguna dhawaaqay in la qaban doono rubuc qarniga hore ee 2018. [More ...]